မြန်မာနိုင်ငံသတင်းစာဆရာအသင်း(MJA) အမှုဆောင်များ ပြန်လည်ရွေးချယ် - Yangon Media Group
ရန်ကုန်၊ ဇူလိုင် ၁၈ – မြန်မာ နိုင်ငံသတင်းစာဆရာအသင်း (MJA) ၏ တတိယအကြိမ် နိုင်ငံလုံးဆိုင် ရာညီလာခံတွင် လာမည့် သုံးနှစ် တာ သက်တမ်းအတွက် အမှုဆောင် များ ပြန်လည်ရွေးချယ်ခဲ့ပြီး အသင်း ၏ ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ဦးမြတ်ခိုင်ကို ရွေးချယ်လိုက်ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ ညီလာခံကို ဇူလိုင် ၁၈ ရက်က SKY STAR ဟိုတယ် တွင် ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ရန်ကုန်တိုင်းဒေသ ကြီး လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင် မောင်ထွန်းနှင့် သတင်းစာဆရာ များ တက်ရောက်ခဲ့သည်။
“သုံးနှစ်တစ်ကြိမ် နိုင်ငံလုံး ဆိုင်ရာ ညီလာခံတွေ ကျင်းပတယ်။ အဲဒီမှာ အမှုဆောင် ရွေးချယ်ပွဲ ကျင်းပတယ်။ ဥက္ကဋ္ဌများသည် သက်တမ်းတစ်နှစ်ပဲ ပါခွင့်ရှိ တယ်။ အမှုဆောင်များသည် ဆက် တိုက် သက်တမ်းနှစ်ဆက်ပဲ ပါ ခွင့်ရှိတယ်။ ပြည်နယ် နဲ့တိုင်းက ဥက္ကဋ္ဌတွေကလည်း ဗဟိုကိုလာရ မယ်။ ဒါမှသက်တမ်း မပြတ်အောင် ပေါ့။ ဒီနေ့ကတော့ အမှုဆောင် တွေပြန် လည် ရွေးချယ်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ် ” ဟု မြန်မာနိုင်ငံ သတင်းစာဆရာအသင်း(MJA)ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်လာသူ ဦးမြတ်ခိုင်က ညီလာခံတွင် ဒီမိုကရေစီတူဒေး သို့ ပြောသည်။
ညီလာခံတွင် အသင်း၏ ဥက္ကဋ္ဌ အဖြစ် ဦးမြတ်ခိုင်၊ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ (၁) ဦးဝင်းငြိမ်း၊ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ(၂) ဦးကျော်စွာမင်း (ခ)D-မင်း၊ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ(၃) ဦးရဲမင်းဦး၊ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဦးသာ ဇော်၊ တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး(၁)ဒေါ်အိအိတင်၊ တွဲဖက် အတွင်းရေး မှူး(၂) ဦးဇေယျာမြတ်ခိုင်နှင့် အမှု ဆောင်အဖွဲ့ဝင်များ ရွေးချယ်ခံခဲ့ ရကြောင်း သိရသည်။
“နာယကက သုံးဦးဖြစ်သွား ပြီ။ ဆရာကြီး ဖိုးသောကြာ၊ ဆရာ ဦးကိုကိုရယ်၊ ဆရာ ဦးသီဟစော ရယ် သုံးဦးပါ။ အလုပ် အမှုဆောင် ကော်မတီက ၂၁ ဦး၊ ဗဟိုကော်မတီ ၀င် ၃၇ ဦး၊ အရန် ကော်မတီဝင်က လေးဦး ရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ် ”
ဟု အသင်း၏ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ(၂) ဦး ကျော်စွာမင်း (ခ) D-မင်း က ပြော သည်။
မြန်မာနိုင်ငံသတင်းစာဆရာ အသင်းဗဟိုဦးစီးအဖွဲ့များအဖြစ် ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခံရသူများ သည် အသင်း၏ သစ္စာအဓိဋ္ဌာန် ငါးချက်ဖြစ်သော (၁) သတင်း အမှန်ကို သိပိုင်ခွင့်ရှိခြင်းတည်း ဟူသော ပြည်သူများ၏ အခွင့် အရေးကို လိုက်နာခြင်း၊ (၂)စာနယ် ဇင်း လွတ်လပ်ခွင့်ကို နိုင်ငံတကာ စံနှုန်းများနှင့်အညီ ရရှိခံစားနိုင် ရေးကို တိုးချဲ့ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ (၃) သတင်းမီဒီယာသမားများ ရရှိ ခံစားအပ်သော အသက်မွေးဝမ်း ကျောင်းဆိုင်ရာ အခွင့်အရေးများ ကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်း ၊ (၄) စာနယ်ဇင်းကျင့်ဝတ်များကို မြှင့်တင်ရင်း အင်အားတောင့်တင်း ခိုင်မာသော စတုတ္ထမဏ္ဍိုင် ပီသရေး ကြိုးပမ်းခြင်း၊ (၅) မြန်မာနိုင်ငံရှိ သတင်းစာဆရာများ သွေးစည်း ညီညွတ်ရေးကို အထူးသဖြင့် အလေးထားလျက် ကြိုးပမ်းဆောင် ရွက်ခြင်းများ လိုက်နာကျင့်သုံးရ မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ကျိုင်းလပ်၌ မော်တော်ဆိုင်ကယ်မောင်းနှင်သူထံမှ စိတ်ြွကရူးသွပ်ဆေးပြား တစ်သိန်းကျော် ဖမ်းဆီ?
လိဂ်-၂ ပြိုင်ပွဲတွင် ဗိုလ်စွဲခဲ့သည့် ရွိုင်ရယ်သန်လျင်အသင်း လိဂ်-၁ ပြိုင်ပွဲသို့ တန်းတက်ခွင?
တက္ကဆက်ဘုရားကျောင်းတစ်ကျောင်းအတွင်း သေနတ်သမားတစ်ဦးက အကြမ်းဖက်ပစ်ခတ်၊ ၂၆ ဦးသေဆုံး
ကောက်သစ်စားပွဲတော် အထူးဒရာမာမှာ ပါဝင်လာမယ့် မင်းသမီး ဂျောင်ဆိုမင်
အမေရိကန်အစိုးရ သက်တမ်းဝက် ရွေးကောက်ပွဲတွင် ဒီမိုကရက်အများစု အနိုင်ရ
ဟားခါးဒေသ၏ အပူချိန် သုညဒီဂရီ စင်တီဂရိတ်အောက် ရောက်ခဲ့ပြီး နှင်းခဲသည်အထိ အေးခဲ့